Bestkpụ ntutu kacha mma nke 50 na edozi isi maka ụmụ nwanyị Na 2021 - Mma
Dị Ntutu Isi Olee Otú Iji Ihe Ndozi Agba Style Ihe Ọmụma & Mmụta Anu Ulo Ejiji Agbamakwụkwọ Ndị Ọzọ Na Akụkọ
Uwe ntutu kacha mma nke ụmụ nwanyị kachasị mma na 2021
Anyị na-enweta ntutu na oge ndụ dị oke mkpa: Mgbe anyị gbasasịrị, tupu anyị enwee ọrụ ọhụụ, mgbe anyị nọrọ ọnwa 12 n'ụlọ. Mgbe otu afọ dị ka 2020, anyị enweghị nnukwu obi ụtọ iwebata mgbanwe n'akụkụ niile, na-amalite site na iri ọhụrụ.
Na enweghị mpempe uhie na ihe ndị anyị na-ahụkarị maka anyị na-achọ ntutu isi, anyị na-ahụ nloghachi na edozi isi dị ka shags, ákwà mgbochi bangs na ọbụna mullets (dị ka a hụrụ na Miley Cyrus na Zendaya). Mana ọ bụrụ na nke ahụ dị ntakịrị mgbanwe maka gị, enwere nhọrọ mgbe niile iji nweta otu ogologo ma ọ bụ ogologo, bangs agwakọtara (yabụ, ụdị nke chọrọ obere mmezi ma ga-eto nke ọma).
N'agbanyeghị ụdị ntutu gị ma ọ bụ ụdị mmasị gị, lee ntutu ntutu 50 ị ga-atụle na 2021.
Njikọ: Anyị Na-ajụ A Stylist: Gịnị Na-eme gị Hair udidi Change?
Foto ndị dị na Karwai Tang / Getty
Jụọ onye na-eme ntutu gị ka ọ kpọọ nkụ - kpọchie mkpọchi gị maka ịmịcha ọnụ.
Gaa mkpụmkpụ na akụkụ ma hapụ ogologo ogologo n'elu. Mgbe ahụ rụọ ọrụ a pomade site na anya anya?
3. Mullet nke oge a
Oge a mullet a la Miley nwere ihu na-akpụzi ihu na ihu na nwayọ nwayọ na azụ. Ndụmọdụ: Akọrọ ncha ntutu bụ BFF gị maka nke ahụ mebiri emebi, ụbọchị abụọ.
4. Ogologo Pixie
N'etiti bob na pixie, ụdị a dị ọtụtụ karịa ka ị chere. Akụkụ ya ma kpochapụ nsọtụ n'otu akụkụ maka ọdịdị mara mma.
5. Tapered n'ígwé
Tinye ndụ ụfọdụ na ntutu ntutu isi site na ịkpụ akwa nwayọ nwayọ nke na -emepụta mmegharị ahụ na ahụ (ọbụlagodi na ha enweghị ike ijide curl).
6. Ezigbo Lob
Akụkụ miri emi dị n'akụkụ na flatironed strands na-ewere lob site na ndị nkịtị gaa nke ọma.
7. Ogologo Ogologo
Ọ bụrụ na ị hụrụ mkpọchi ogologo gị n'anya ma kpọọ ibu ahụ asị, jụọ maka ntutu gị ka ọ bụrụ nke akpacha ajị ajị agba.
8. Sleek na Kwụ ọtọ
Kpoo ntutu na-aga ogologo oge, ma jirizie ígwè dị larịị gafere ya. Mechaa mmiri na-edozi ire ụtọ nke ga-enweghị eriri frizz.
edozi isi maka akwa ihu
9. Loose Ntughari Afro
Gị nwere ike mee afro oburu na inweghi ntutu isi puru iche. Họrọ ya ma tinye obere gel ka o wee nwee ọdịdị ya.
10. Onyekwere Spiky
Mantra gị kwa ụbọchị: teta, pomade ma gawa. Ọ dị mfe.
Michael Kovac / Getty Images maka Moet & Chandon
11. Choppy Azụ
Akara ole na ole bụ naanị ihe ọ na-ewe. Mee ka onye stylist gị jiri ịkwa osisi ị na-achọ ịhụ n'anya nke ukwuu.
gbochie ntutu daa ụlọ ịgba akwụkwọ
12. Curkwà mgbochi
Na-eto eto ma ọ bụ chọọ ịdị mfe n'ime ihe niile? Styledị a dị mma maka ha abụọ. Dabere na ntutu gị ma jụọ maka ogologo oge.
13. Onye Na-ebu Undercut
Edgy mgbe ntutu gị dị elu, anaghị ahụ anya mgbe ntutu gị dị ala. Ọkpụkpụ a dị mma maka ụmụ nwanyị nwere ntutu dị mkpụmkpụ, n'ihi na ọ na-enye gị ohere iweghachi ntutu gị na-enweghị otu nde iberibe na-ada n'azụ.
14. Ederede Gelled
Lamụ nwanyị ndị nwere ntutu isi: Elegharala akụkụ ndị ahụ anya. Mgbe etinyere ha nke ọma, ha dị ka nka. Dab na ntakịrị ihe ude akara ude ma jiri brọsh mee nro dị nro iji kpụzie ha ka ebili mmiri.
15. Angular Afro
Afro nke oge niile mara mma, mana akụkụ-akụkụ na-eme ọdịiche niile. Jiri mkpokọta rattail maka akara ziri ezi.
Mgbe a na-egbutu lob ntakịrị elu na azụ, ọ na-enye ohere ka iberibe ihu ịda daa karịa n'atụghị egwu. Gụọ: Enweghị ntutu triangle poofy.
17. Super-Short Pixie
Nke a dị mkpirikpi 'ime bụ obere mmezi, ị nwere ike ịpụta n'elu akwa ma gaa. Oh, ọ na-arụkwa ụdị ntutu niile, site na coily ruo ogologo.
Ghichaa akụkụ nke isi gị ma debe obere ogologo n'etiti. Ugboro ole na ole na-emebi emebi mere ka ọ dị ọhụrụ.
Ogologo nke na-atọ ụtọ n'ụzọ nkịtị onye ọ bụla. Gwa ya ka o tie n’elu ubu gị, n’ihi ya, ọ dị mkpụmkpụ ma a fegharịa ya aka.
20. Isi mmụọ Bob
Mgbe ọ bụla pere mpe karịa na azụ ma jiri nwayọ nwayọ n'ihu, ụdị a kacha mma mgbe ị na-eyi uwe (yabụ ị nwere ike ịhụ gradient dị nro).
21. Oke Mbupute
Igwe ntutu na-acha uhie uhie, nke a bụ maka gị. N'ígwé gị dum n'isi ga-amụnye ihe maka ihe na-enweghị ibu ibu.
Dịtụ ogologo n'otu akụkụ karịa nke ọzọ; akụkụ akụkụ miri emi na-emesi ọdịiche dị na ogologo ike.
Ihe osise Mark Davis / Getty Images
23. Layered Shag
Ghichaa eriri dị mkpa n'ime obere shag maka mmelite dị egwu.
Kpamkpam symmetrical bụ otú anyị na-amasị ya. Debe ọtụtụ olu na akụkụ ya na akụkụ etiti.
25. Ejiri ákwà mgbochi na-ekpuchi ákwà
Isi ihe bụ ime ka bangs gị jikọta na oyi akwa gị.
26. Ugbo esika
N’etiti pixie na afro, ụdị a dị n’ụdị zuru oke mana ọ ka dị jụụ n’enweghị nsogbu.
Maka gal-toro eto nke na-ahụkarị ụlọ ahịa na-ere ahịa na azụ ahịa.Mee ka onye stylist gi hichaa ha ka ị ghara ime ngwa ngwa.
okwu banyere nri siri ike
28. Ogologo na Ntughari
Girlsmụ agbọghọ nwere ike ịga ogologo oge. Naanị jụọ maka akwa ogologo ka ihe wee ghara ịdị arọ.
29. Onyinye Shaggy
Ugboro ole na ole na ebili mmiri na-eme ka anya aosimiri-chic.
30. Akụkụ Swept Bangs
Kpụ ntutu na-eme ka ị dị ka pound iri na-adị gịrịgịrị. Mba, n'ezie. Akuku ebe a na-eme ka anya gi chee iru gi di warara.
Rachel Murray / Getty Images maka L''Oreal Paris
31. Layered Curls
Maka olu ozugbo na bob, gbakwunye ebili mmiri dị nro dịka Viola ebe a.
32. Onye kere Pixie
Obere oge n'akụkụ karịa n'elu, ọ bụ pixie ogologo maka ntutu isi. Aka zuru oke iji gosipụta ọkpụkpụ gị.
33. Akpọrọ akụ
Onye kwuru na bangs kwesịrị ịdị ogologo? Ghichaa akọrọ ndị a, yabụ ị ga-agụ ihe ziri ezi n'ogologo.
34. Tousled Lob
Obere, swingy na voluminous. Obere akụkụ tụgharịa na-agbakwunye na vibe na-enweghị isi.
35. Ntughari Shag
Mkpọchi mkpụmkpụ mkpụmkpụ, mkpụmkpụ mkpụmkpụ na un-fussy bangs na-eme maka nchikota mmeri.
36. Short Short-Framing n'ígwé
Na-etinye uche gị niile na ọmarịcha ihu gị na akwa nke na-adọta anya elu. Daashi: Isi ihe ole na ole na-eme ka ụcha mara mma.
37. Onye azacha Pixie
Gaa mkpụmkpụ na azụ wee dịtụ ogologo karịa n’elu. Ghichaa ntutu n'ihu ka ị nweta ihu ahụ.
38. Bouncy Curls
Ha anaghị ekwu naanị ihe ọchị — ha bụ. Mkpirisi dị mkpụmkpụ nke bidoro n'ụlọ nsọ ahụ gbakwunye ọtụtụ olu ruo ala.
39. Ubu ndi n’atu ahihia
Nke a n'etiti-ogologo ịkpụ ihu ọma ekwekọghị onwe ya. Hapụ ya ka ọ kọọ ikuku maka ọdịdị ya na oke ya.
40. Bouncy Bob
Hụrụ ogologo nke bob, mana ịchọrọ karịa ahụ? Bee otutu uzo di ogologo na ihu gi maka oomph ozo.
Buzzed ozugbo, edozi isi a bụ nkọwa nke enweghị nsogbu. Ntuziaka: Ọ bụrụ na ị gaa maka ọnụ ọgụgụ atọ ma ọ bụ anọ, ntutu gị ga-eto ogologo ogologo (ma ọ bụrụ na ịchọrọ).
42. Mpịakọta Pixie
Olu niile na enweghị nke ibu. Ọ dị ka igwe ụra nke toro eto-na-ehicha ntutu isi na azụ maka ikuku na-egbu maramara.
43. Bob na Bangs
Choppier na njedebe, nke ka mma. Rịba ama: Nke a bụ otu ịkpụ nke ga-achọ mkpụbe oge iji mee ka ogologo kachasị mma.
Ihe akaebe na ogologo oge anaghị agwụ ike. Bee akwa n'okpuru ubu iji gbakwunye ibiaghachi na ebili mmiri.
45. Shag nke oge a
Short na feathered maka mmeri. Hairstyledị ntutu a na-agbakwunye ahụ na ntutu isi.
ndụmọdụ kacha mma kacha mma maka anụ ọkụ
46. ​​Otu Ogologo Midi
Nnukwu uzo dị oke ala nke na-agbada n'okpuru eriri olu na-abụkarị posh mgbe ị na-eyi uwe.
47. Uyo n'usoro
Can’t gaghị echefu akwa ndị a. Jụọ maka akwa-gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ akụkụ n'akụkụ n'ihu iji mee ka ntutu siri ike.
48. Ubu Ogoji Ugba
Enwere ihe kpatara Duchess ji eyi edozi isi a nke ọma-ọ bụ kpochapụwo, kpochapụ ma na-arụ oke okpu (ma ọ bụ okpu, ma ọ bụrụ na ị bụ mmadụ efu dịka anyị).
49. Babymụaka Akpịrị
Bangs ndị a bụ ụma oke mkpụmkpụ ma anyị hụrụ ya n'anya. Ghichaa ha ole na ole dị elu karịa nku anya gị maka ụdị ejiji ahụ dị elu.
50. Akụkụ Afụọnụ
Were akụkụ akụkụ ahụ n'akụkụ oke ọhụụ site na ịkpụchasị akụkụ ahụ dị gịrịgịrị laa azụ n’azụ ntị gị.
Njikọ: Bestkpụ ntutu kacha mma maka ọdịdị ihu gị
Categories Ga-Ahụ Ngwaahịa International
kacha mma n'ime ụlọ maka ikuku dị ọcha
ayodiin bara ụba nri maka thyroid
www bekee ihunanya fim
nne ụbọchị na-akpa ọchị
ihe omimi kachasi elu Hollywood fim
ezigbo ihe nkiri bekee maka ụmụaka
ọgwụgwọ ụlọ iji tufuo ntutu ihu